मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्तामा पनि नआउने, अब कहिले ? | नेपाली पब्लिक मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्तामा पनि नआउने, अब कहिले ? | नेपाली पब्लिक
मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्तामा पनि नआउने, अब कहिले ?
नेपाली पब्लिक २०७६, २५ असार बुधबार १५:४८
काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ताभरिमा पनि आउन गाह्रो हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति तय गरे पनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका अर्थसचिव डा. राजन खनाल अमेरिका गएका कारण सार्वजनिक हुने समय केही पछि सर्ने भएको हो ।
सचिव खनाल गत मंगलबार राति अमेरिका गएको र उनी साउन २ गते मात्रै नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा असार २७ गते मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको थियो । ‘अर्थसचिव बाहिर हुनुभएकाले आगामी साउनको पहिलो सातामा पनि मौद्रिक नीति आउन गाह्रो छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सचिवज्यू आएपछि तीन/चार वटा त बैठक नै हुन्छ । त्यो सकिएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने हो ।’